Homeअन्तरवार्ता‘नेकपा फुट्दा देश बर्बाद हुँदैन, सरकार ढल्यो भने अर्को बन्छ’
November 17, 2020 kandai kanda 1 अन्तरवार्ता
बैठक नगर्ने मान्छे पार्टीको नेता हुन्छ ? यही पार्टीले नेता बनाएको होइन ? बैठकमा कसैले राजीनामा माग्छ भने आँट गर्नुपर्‍यो नि । म फेस गर्छु भन्नु पर्‍यो नि । अनि त्यो हिम्मत नगर्ने मान्छेले कोठामा बसेर पद जोगिन्छ ? जोगिँदै जोगिँदैन । त्यसका लागि त आउनुपर्‍यो नि । अनुचित लाग्यो भने हामी पनि तर्क गरौं । यो त ज्यादती भयो भनौंला । वा यो ठीकै हो भनौंला । छलफल त बैठकमा हुन्छ नि ।-अनलाइनखबर
ओलीको सन्देश लिएर खुमलटार पुगे विष्णु पौडेल